ရုရှား၌ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း? ကဘယ်လောက်ကြာ built ခဲ့သလဲ အဘယ်အရာကိုမြို့? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရုရှား၌ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း? ကဘယ်လောက်ကြာ built ခဲ့သလဲ အဘယ်အရာကိုမြို့?
Софийский собор в Новгороде Великом. 1045 — 1050.
ဆယ်ပါး # 769; စဉ်ဆက်မပြတ်စျေးနှုန်းများ # 769 Tse; ကိယက်ဗ်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကို (မင်္ဂလာသတို့သမီးကညာမာရိ၏ Assumption ၏ဘုရားကျောင်း) Kievan ရု၏ပထမဦးဆုံးသောကျောက်ဘုရားကျောင်း
ဒါဟာ 986 နှင့် 996 နှစ်အကြားတည်ဆောက်ထား
Многие действительно думают что София Новгородская это древнейший храм России. Но это не так — есть древнее — в Архызе — там два храма первой четверти 10 века, и один (кафедральный) первой половины 10 века. Там же находится уникальное наскальное изображение Христа9век, и остатки древней астрономической обсерватории (катати и в наше время там находится одна из крупнейших в мире обсерваторий САО РАН) . Лик схож с синайской иконой Христа Пантократора, написанной восковыми красками (а если кто не помнит, то: при сравнительном анализе синайского лика с изображением на Туринской плащанице учеными было выявлено 45 совпадений) . В кафедральном храме в 916 году при константинопольском патриархе Николае Мистике произошло массовое крещение населения Западной Алании. Небольшая церковь пророка Божия Илии, в которой совершались богослужения еще до крещения Руси, является древнейшим действующим христианским храмом на территории России.
စိန့်ဂျွန် Kerch အတွက်ဗတ္တိဇံဆရာ, ယူဆရ 8-9 ရာစုဘုရားကျောင်း
ရုရှား၌ရှေးအကျဆုံးသြသဒေါက်အသင်းတော်များ Karachaevo-Cherkessia Arkhyz နှင့် Teberdinsky ဉျအတွက်ယခုအဘယ်အရာကိုတည်ရှိသည်။ built ဘိုင်ဇင်တိုင်းသာသနာပြုများအားဖြင့်အျောသိုဒေါလကျခံသူ9နှင့် 10 ရာစုနှစ်များစွာအတွက် Alan တည်း။
အလယျပိုငျးဗိမာနျတျော Alani အခြေချ။
မြောက်ဗိမာနျတျော Alani အခြေချ။ Diocesan ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။
Церковь Воскрешения Лазаря (вторая половина XIV века) — один из древнейших памятников деревянного зодчества на территории России, сохранившихся до наших дней. Предание гласит, что церковь была построена преподобным иноком Лазарем, который прожил 105 лет и скончался в 1391 году. Церковь стала первой постройкой будущего Муромского монастыря, расположенного на восточном берегу Онежского озера. Церковь Воскрешения Лазаря древнейшая из сохранившихся деревянных православных храмов на Русском Севере.
အဆိုပါ XV ရာစုသစ်သားဘုရားကျောင်း။ Ivanovo-Voznesensk ဗလာဒီမာပြည်နယ်၏မြို့အတွင်းရှိမင်္ဂလာသတို့သမီးကညာမာရိ၏ Assumption ၏နာမ၌။
အဆိုပါ Nerl, Bogolyubovo ဗလာဒီမာဒေသ 1165god အပေါ်ကြားဝင်အသနားခံ၏ဘုရားကျောင်း။
Собор Бориса и Глеба в Кидекше — древнейший храм Суздальского района, он был построен в княжеской резиденции Юрия Долгорукого в 1152 году.
စိန့်ဂျော့ခ်ျရဲ့ဘုရားကျောင်းဟာလီနင်ဂရက်ဒေသကြီး XII ရာစု၌တည်၏။
ဗလာဒီမာ, Novgorod, Smolensk, Yaroslavl, Tver ခုနှစ်, Kostroma ဒေသများတွင်ရှိသောအသင်းတော် (နှင့်မဟုတ်တဦးတည်း) XI-XII ရာစုနှစ်များစွာက built-in များနှင့်ယနေ့တိုင်ထိန်းသိမ်းထားလည်းဖြစ်ကြသည်။
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,248 စက္ကန့်ကျော် Generate ။